Carruur nafaqo-darro ugu dhimatay Muqdisho
Carruur nafaqo-darro ugu dhimatay Muqdisho
Photo | Cunug nafaqo-darro looga daweynayo isbitaal Banaadir/Xamdi Xasan Yuusuf/Ergo
Radio Ergo 06 June, 2017 MUQDISHO
(ERGO) - Afartan iyo afar carruur ah oo laga keenay xeryaha lagu barakacay ayaa labadii toddobaad ee u dambeysay nafaqo-darro ugu geeriyootay isbitaal Banaadir ee Muqdisho. Waxaa isbitaalka hadda jiifa oo xaaladdooda lala tacaalayaa 87 carruur ah sida ay noo sheegtay Dr. Luul Maxamuud Maxamed oo ah madaxa qeybta carruurta ee isbitaalka. Way sii kordhayaan tirada kiisaska nafaqo-darrada oo dhowrkii bilood ee la soo dhaafay ka jirtay xeryaha magaalada iyo duleedkeeda, kuwaas oo ay ku biireen qoysas ka soo barakacay abaaraha.
Dhaqtaradda ayaa Raadiyo Ergo u xaqiijisay in bukaannada loo keenay ay u badan yihiin kuwo qaba nooca daran ee nafaqo-darrada oo xaaladdooda ay aad u liidato. “Mararka qaar waxaa dhacda in aysan qaadan karin cuntooyinka jirkooda loogu soo celiyo nafaqada, waxaana ku siinnaa tubbo,” ayay tiri. Isbitaalka ayaa bukaannada siiya dawooyin ay weheliyaan caano iyo buskut nafaqada soo celiya. Waxaa qaarkood nafaqo-darrada u weheliya xanuunno kale sida jadeeco, shuban, dhiig-la’aan iyo oofwareen.
Waxay xustay in nafaqo-darradan ay ka dhalatay abaarta, cunto-yarida haysata qoysaska soo barakacay iyo cudurrada oo isbiirsaday.
Gabar ay ayeeyo u tahay Raxmo Ibraahim Nuur oo 67 jir ah ayaa ka mid ah carruurta ay nafaqo-darrada tabardarreysay ee tubbada wax lagu siiyo. Waxay Raadiyo Ergo u sheegtay in sagaal maalmood ay isbitaalka kula jiraan welina aysan xaaladdeeda soo hagaagin. Gabadhan oo agoon ah waxaa heynteeda isku bedbeddela ayeeyadeed iyo hooyadeed oo xerada Weydow ku haysata wiil jira 18 bilood oo ay saacado badan ka maqnaan karin. Iyada iyo saddex carruur ah oo la dhalatay ayay ku dhaceen jadeeco iyo shuban sababay inuu dhinto wiilka ka weyn oo jiray 6 sano. Labada kale way bogsadeen.
Qoyskan oo labo bilood ka hor ka soo barakacay degmada Baardheere ee gobolka Gedo ayaan si joogto ah carruurta ugu helin wax ay cunaan. Qoysaskii ka soo horreeyay ee soo barakacay ayay mararka qaar la cunaan raashinka ay karsadaan.
Maryan Naasir Weheliye oo isbitaal Banaadir kula jirta gabadheeda oo labo sano jir ah ayaa Raadiyo Ergo u sheegtay in labo maalmood oo halkaas lagu baxnaaniyay kaddib ay wax weyn iska beddeleen xaaladdeeda. Waa qof dawada iyo cuntada la siiyo ay caloosheeda ku negaanayaan, hase yeeshee maalmihii ka horreeyay oo ay ku haysay aqalka ay ka deggan yihiin xerada lagu barakacay ee Tabeellaha Sheekh Ibraahim aad bay u qandhaneyd. Way ka go’day cuntada iyo caanaha, wax kasta oo la siiyana way soo matageysay.
“Markii aan isbitaalka keenay waxaa la ii sheegay inay daran tahay nafaqo-darrada haysa oo ay khasab tahay in la seexiyo,” ayay tiri. Gabadhan nafaqo-darrada ka hor waxaa isugu darmay jadeeco iyo shuban-biyood.
Dr. Luul ayaa sheegtay in ay mararka qaar dhacdo in maalmo kaddib isbitaalka dib loogu soo celiyo carruur ay nafaqo-darrada ka daweeyeen, taas oo ay ugu wacan tahay in aanay helin nafaqeyn iyo cunto isku dheellitiran oo ay lagama maarmaan tahay inay qaataan muddo labo bilood ah si ay si buuxda ugu so kabtaan.